शेयर शिक्षा - Arthasansar
पछिल्लो समय नेपालको सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुको थपिनेक्रम बढेको छ...
सेयर शिक्षा : मूल्य संवेदनशील सूचना भनेको के हो ?
धितोपत्रहरुको बजार मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचनाहरुलाई मूल्य संवेदनशील सूचना भनिन्छ । ...
आइतबार, १७ असोज २०७८, १३ : ३८
सेयर शिक्षा : लगानीकर्ताको अधिकार के-के हाे ?
साधारण सेयरधनीले सम्बन्धित कम्पनीको नाफामा सरिक हुने अधिकार पाउँछन् । ...
आइतबार, ०३ असोज २०७८, १३ : ४९
सेयर बजारमा लगानी गर्ने इच्छा छ ? यी १४ कुरालाई ध्यानमा राख्नुस्
कुनै पनि व्यक्ति संघ तथा संस्थाले सेयर बजारमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि जान्नै पर्ने कुराहरू धेरै हुन्छन् । ...
सोमबार, १४ भदौ २०७८, १५ : ४९
सेयर शिक्षा : कारोबार अस्वीकार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
सम्पन्न भएको कारोबारलाई अस्वीकार गर्न पाइँदैन । ...
सोमबार, ०७ भदौ २०७८, १३ : २३
आईपीओलाई अन्य धितोपत्र भन्दा बढी जोखिमपूर्ण किन मानिन्छ ?
साधारण सेयर (आईपीओ) मा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सम्बन्धित कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ । ...
आइतबार, ०६ भदौ २०७८, १३ : ५७
नेपालको सेयरबजारमा पछिल्लो केहि दिन यता म्युचुअल फण्ड अर्थात सामुहिक लगानी कोषका ईकाइहरुमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ । विभिन्न मर्चेन्ट बैंकहरुले जारी गरेका म्युचुअल फण्डहरुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।
आइतबार, १० साउन २०७८, ०६ : २५
कस्ताे अवस्थामा कम्पनी खारेज हुन्छ ? खारेज हुने कम्पनीबाट सेयरधनीहरुलाई कसरी रकम दिइन्छ ?
अदालतले कम्पनी खारेजीमा लैजाने फैसला गरेको अवस्थामा लिक्युडेटर पनि तोकिदिएको हुन्छ । ...
बुधबार, ०६ साउन २०७८, १८ : १०
अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ता कसरी छुट्याइन्छ ? EDIS कसरी गर्ने ? (भिडियाे)
नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट लागू हुने गरी अल्पकालिन लगानीकर्ता र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई विभाजन गरी छुट्टाछुटटै पूँजीगत लाभकरको निर्धारण गरिएकाे छ । ...
मंगलबार, ०५ साउन २०७८, १३ : २९
सस्तोमा सेयर बेचेर महंगोमा किन्ने कि होल्ड गर्ने?
सेयर बजारमा पछिल्लो समय केही नकारात्मक समाचारहरु आए । जसले गर्दा निरंतर बढिरहेको बजारमा नयाँ लगानीकर्तालाई त्रसित बनाइ दियो । धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीलाई लगानी गर्न ‘जोखिमपूर्ण’ भन्दै एउटा सूची...
शुक्रबार, १८ असार २०७८, ०० : ००
सेयर शिक्षा : लगानी विविधिकरण भनेको के हो ? कस्ताे सेयरमा जोखिम हुन्छ ?
आफुसँग भएको पुँजीलाई धितोपत्र लगायतका विभिन्न सम्पत्तिमा लगानी गर्ने कार्यलाई लगानी विविधिकरण भनिन्छ । ...
विहीबार, १७ असार २०७८, १४ : १९
सेयर शिक्षा : कतिसम्मको कारोबारमा कति तिर्नुपर्छ ब्रोकर कमिसन ?
पछिल्लाे समय सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरू भित्रिने क्रम बढ्दाे छ । ...
आइतबार, १३ असार २०७८, १४ : ०८
एक्सचेन्ज बाहिर कारोबार सम्भव छ ? कसरी हुन्छ ?
सामान्य अवस्थामा सूचीकृत धितोपत्रहरुको स्टक एक्सचेन्जभन्दा बाहिर कारोबार हुन सक्दैन् । ...
विहीबार, १० असार २०७८, १३ : ४४
धितोपत्रको उन्नतोन्मुख बजार (Bull Market) भन्नाले बजारको क्रमिकरुपमा उभो लाग्दै गरेको स्थितिलाई जनाउँछ । यस प्रकारको बजारमा उद्योग, बैकिङ्ग, बीमा लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रको सुधार सँगसँगै कम्पनीमा कुशल ब्यवस्थापनका कारण...
मंगलबार, ०८ असार २०७८, १४ : १७
अधिकृत पुँजी भन्नाले कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने अधिकतम सीमा भन्ने बुझिन्छ । यस्तो अधिकतम सीमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गरी वृद्धि गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । ...
सोमबार, ०७ असार २०७८, ०९ : १०
सेयर बजारमा उछालपछि नेप्सेको विज्ञप्तिः दियो लगानीकर्तालाई यस्तो सुझाव
हिजो मंगरबार नेपालको नेप्से परिसुचक र कारोबार रकमले हाल सम्मका सबै रेकर्डहरु ब्रैक गर्दे सर्वाधिक सर्वाधिक उच्च बिन्दुमा पुगेको नेपाल स्टक एकस्चेन्ज(नेप्सले) जनाएको छ । ...
बुधबार, ०५ जेठ २०७८, १० : २८
अहिले नेपालको सेयरबजारका लागि स्वर्णिम युग हो । नेप्से सर्वाधिक उच्च बिन्दुमा पुग्नुका साथै सेयर कारोबार रकममा समेत उल्लेखिय बृद्धि भएको छ भने धितोपत्रको दोस्रो बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुको बढ्दो आकर्षणले...
बुधबार, ०८ बैशाख २०७८, ११ : ५२
लगानी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यस्ता छन् सेयर विश्लेषक बिमल तिवारीका टिप्स
लगानी गर्ने कुनैपनी व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा भनेकाे लगानी व्यवस्थापन हाे । ...
विहीबार, १९ चैत्र २०७७, १२ : १९
सेयरमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी कुरालाई ध्यानमा राख्नुस्
के तपाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? ...
सोमबार, १६ चैत्र २०७७, १३ : १५
सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फन्ड) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरुको सहभागीता रहने गरी परिचालन गरिएको लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएका प्रतिफल सम्बन्धित ...
मंगलबार, ११ फागुन २०७७, ०८ : १९
नेपाल बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, हेर्नुस् कुन खातामा कति ब्याज ?